Akon’ny tontolon’ny bilaogy Kiswahili: Hira, poezia, literatiora, politika (2005) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2019 9:18 GMT
Mawazo na Mawaidha avy any Kenya manaraka akaiky ny famangitana ireo voatra isan-karazany amin'ny rindrambaiko sy programa solosaina amin'ny teny Swahili. Tamin'ity herinandro ity dia nanoratra sy naneho hevitra fohy mikasika ny fampahafantarana ny programan'ny Windows sy Office amin'ny teny Swahili izy. Kilinux (Tetikasa Famangitana Swahili Misokatra) namoaka ny Swahili tovozona malalaka, Jambo Open Office, Desambra 2004.
Mandinika ny voatra Microsoft vaovao sy ny Jambo Open Office, manamarika izy fa tsy mitovy mihitsy ny safidin-teny sy fepetra eo amin'ny roa tonta ka mahatonga ny olona hihevitra fa mampiasa fiteny roa samihafa izy ireo. Mihevitra ihany koa izy fa mety hanasaritaka ny mpiserasera ny teny swahili an'ny Microsoft ho an'ny programany Windows sy Office.
Faly i Mwandani fa nahazo ny loka Womex tamin'ny Fampiratiana Mozika Manerantany Womex fanao isa-taona faha-11 tany Angletera i Bi Kidude, mpiangaly mozika 93 taona avy any Zanzibar. Bi Kidude, izay nanomboka nihira tamin'ny taona 1920, no lohahevitry ny lahatsary fanadihadiana vaovao “Antitra toy ny Lelako: Ny Tantara sy ny Fiainan'i Bi Kidude”, izay navoaka nandritra ny Fampiratiana ihany koa. Taorian'ny dian'ilay olo-malaza Siti Binti Saad, Bi Kidude no nankasitrahana tamin'ny famoronana indray ny Taarab tamin'ny fampifangaroana ny tsiro eo an-toerana sy ny ampongatapaka unyago.
Mwandani mampahafantatra antsika ny Jagwa Music, vondrona tsy dia fantatra avy any an-tanàna itatr'i Dar Es Salaam. Vondrona nandray anjara tamin'ny Fampiratiana, nilalao mozika tena miavaka antsoina hoe Mchiriku. Endrika tena malaza eo amin'ireo vondrom-piarahamonina kely fidiram-bola any Tanzania, indrindra ny any amoron-dranomasina ny Mchiriku. Heverin'ny ankamaroan'ireo Tanzaniana manankarena sy nahita fianarana ho tsy misy dikany sy manelingelina loatra ny gadony miverimberina sy haingana. Tena vitsy ireo onjam-peo mandefa Mchiriku. Lalaovina miaraka amin'ny kitendry tazonin-tanana, mazàna mipetraka eo ambonin'ny tongotry ny mpihira, boaty fahiny efa simba, velesina amin'ny hazo, boaty feno vatokely na fasika, kiririoka, ary amponga ny Mchiriku. Fantatra amin'ny fanehoan-kevitra masiaka ara-tsosialy ny hira Mchiriku.
Harakati mamelona ny adihevitra momba ny teny swahili ankehitriny ho an'ny voambolana bilaogy: blogu. Tsy tian'i Harakati ilay voambolana. Naneho fahatsapana toy izany koa ireo bilaogera Swahili maromaro tamin'ny lasa. Te-hanohy ny adihevitra i Harakati.
Fomba fanao mahazatra eo amin'ireo poeta Swahili ny mifanamby amin'ny fampiasana teknika isan-karazany amin'ny tononkalo sy ny Swahili lalina. Ohatra, poeta iray manoratra tononkalo iray ary poeta iray hafa mamaly izany tononkalo izany amin'ny alàlan'ny tononkalo iray azy manokana. Ity fomba fanao ity moa efa nampifandraisina tamin'ny Uhuru, gazety Tanzaniana nandritra ny taona maro izay hany nanolotra toerana malalaka ho an'ireo poeta Swahili mba hamoahana ny sangan'asan'izy ireo. Mamindra ity fomba fanao ity amin'ny sehatra antserasera amin'ny alalan'ny bilaoginy ireo bilaogera poeta roa, Kasri la Mwanazuo sy Fasihi za Ufasaha .
Fotoana tena mahaliana manokana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiswahili. Mampientanentana tokoa ny mety hahatonga ny bilaogy ho lasa iray amin'ireo fomba ahafahan'ny mpanoratra sy poeta Tanzaniana miala amin'ireo olana mifandraika amin'ny halafosan'ny famoahana boky sy ny lafiny ara-toekarena amin'ny fitsinjarana izany. Ohatra, noho ny fitsinjarana voafetra, dia matetika vakiana any Tanzania sy Kenya ny tantara amin'ny teny Swahili. Raha misy literatiora amin'ny teny Swahili amin'ny endriny nomerika amin'ny aterineto, izay ahafahan'ny manerantany miditra amin'izany, dia afaka mamaky azy ireo ireo mpiteny Swahili any Oman, India, Etazonia, Shina, Meksika, Afrika Atsimo sy ny any an-kafa. Mampiasa izany fidanadanana izany, mikasa hamoaka ny tantara an-tsoratra voalohany ao amin'ny bilaoginy i Kasri la Mwanazuo.
Tamin'ny 14 Desambra 2005, nandeha nandatsa-bato ny Tanzaniana mba hifidy filoham-pirenena sy mpikambana ao amin'ny Parlemanta izay hanompo ny firenena mandritra ny dimy taona manaraka. Araka ny efa nampoizin'ireo olona manaraka ny politika ao Zanzibar, misy ny tatitra fisian'ny herisetra. Fikra Thabiti manoratra ny fifidianana avy any Zanzibar. Milaza amintsika izy fa nandresy tao amin'ny fari-pifidianana Mji Mkongwe nifaninanana mafy ny mpanohitra ao amin'ny the Civic United Front (CUF).
Tena matanjaka ao amin'ny nosy Pemba, nosy tanindrazan'ny Sekretera Jeneraliny, Seif Hamad ny Civic United Front. Resin'ny filohan'i Zanzibar ankehitriny, Amani Karume, tamin'ny Oktobra tamin'ity taona ity tamin'ny isa tery dia tery i Seif Hamad. Nandritra ny fifidianana maro samihafa roa farany teo, nahazo ny seza rehetra tao Pemba ny CUF ary iray tao amin'ny nosy Unguja (itoeran'ny governemantan'i Zanzibar). Mji Mkongwe irery ihany matetika no faritra andresen'ny CUF ao Unguja. Nanatri-maso ny fisian'ireo polisy marobe manerana ny faritra izay niezaka nanakana ireo mpanohana ny CUF tsy hankalaza ny fandreseny i Fikra Thabiti.
Bilaogera an-tsary, Issa Michuzi, mampiseho antsika ny “trano fotsy” ao Tanzania izay hipetrahan'ny filoha manaraka, izay hambara afaka fotoana fohy.
Ary raha tsy fantatrao fa mampiasa fitateram-bahoaka ny biby any Tanzania, dia jereo ity sary ity. [mba fanalan'andro]